The Fest St. Martin - dhaqanka iyo weli ilaa taariikhda
St. Martin - Saint Martin Ku dabaaldeg xafladaha
St. Martin - Dhaqanka iyo casriga
U soo guurista St. Martin
Dhaqamada kale ee la xiriira St. Martin
Damaashaadka St. Martin ee Tours waxay ku jiri doonaan 11. Damaashaadka Bishii Nofeembar iyo kala duwanaansho Gobollo badan. Si kastaba ha ahaatee, sheekada St. Martin iyo ficil caan ah - wadaagista dharka - waa meel kasta oo ay joogaan.
11. Dhinaca kale, November ayaa lagu xusay sababtoo ah waxay ahayd maalinta Martineeynta. Tani waxa ay ahayd sanadka 397 illaa iyo wakhtigaas waxaa lagu dabaaldegaa bartamaha Yurub waxaana loo sameeyay si ka duwan sida ku xiran gobolka.
Luminous Saint Martin Lanterns
Haddii aad xisaabiso, taariikhdani waxay sidoo kale ku saabsan tahay 40 maalmood ka hor Christmas-ka iyo sidaas bilowga Lent, sida laga soo qaatay qarniyadii dhexe, gaar ahaan kaniisada Ortodoksiga.
Sida bilowgii Lent on the carnival, Maalinta St. Martin siiyey dadka si ay u cunaan si qumman iyo cibaado leh, ka hor inta maalmood 40 xiga waa cunto yar yar ama wax ku dhow.
Rhineland waa 11. Bishii Nofembar sidoo kale bilowgii xilli-ciyaareedkii hore. Intaa waxaa dheer, canshuuraha ayaa la bixiyay maalintaas, inta badan caynka iyo berriga. Xayawaanka ayaa si kale u baahi lahaa in la quudiyo xilliga jiilaalka, sidaa darteed saamiyadu waxaa loo jaray habkan iyo isla deynta la mid ah.
11. Bishii Nofembar, si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd maalin caadi ah oo xiriirka shaqaaluhu uu dhammaaday ama dib loo bilaabay, kaas oo kiro ama xiisado dulsaar ah ay soo dhamaatay oo mar kale bilaabeen. Maalinta Martini marwalba waxay ahayd waqtigii bilawga iyo dhammaadka dhaqaalaha oo sidaas awgeed loo yaqaanno dulsaar.
Caadiga ah cunista Goose Martin ayaa sidan loo sharxi karaa, laakiin sidoo kale waa halyeey wax ka sheegaya xidhiidhka Martinsgans. Martin ayaa loo doortay hoggaamiyaha kiniisaddu, kaas oo aan doonaynin oo qarin. Geese ayaa ku sheekaysanayay khiyaanadii uu ku dhuumaaleysnaa, sidaas awgeedna wuxuu suurtagal u ahaa inuu weli sifeyn karo. Laakiin waxaa kale oo jira sheekooyin kale oo ku saabsan cuntada goos gooska ah, ee Jarmalka goose waxaa loo adeegaa badi gobollada leh buraash iyo kaabajka cas.
Saint Martin wuxuu ku heesaa qoraallada iyo qoraalka foomka carruurta ee saaxiibtinimo leh muusikada loogu talagalay midabka
Carruurta, xeryaha St. Martin waxay sabab u tahay dabbaaldegga sababo kala duwan. Guryaha noocan ahi waxay ka dhacaan wadamo badan oo yurub ah, inkastoo faahfaahin yar oo kala duwan ay ku kala duwan yihiin gobollada. Dhammaantood way wadaagaan, si kastaba ha noqotee, nasiib-darro leh foosto ama foorno iyada oo loo marayo meesha ay degan yihiin. Fududyada ayaa la soo iibsadaa ama waxaa la gooyaa xanaanada caruurta iyo iskuulka caruurta.
Dhaqdhaqaaqyada waxay sidoo kale ka dhacaan tuulooyinka yaryar, xannaanada carruurta ee xaafadda waxaa laga yaabaa inay yeeshaan madadaalo, taasoo ka dhacda taariikh kale marka loo eego ardayda ka socota dugsiga. Sidaas awgeed waxaa dhici karta in kaniisadda qaar ka mid ah laba ama saddex jeer marti-galin St. Martin la arki karo. Haddii aysan jirin wax ku filan oo loogu talagalay St. Martin, laakiin waa la dhaafaa oo tareenku wuxuu dhacaa hal mar.
Xilligan, waxay dadku la socdaan St. Martin. Tani waxay ku xiran tahay gobolka gobolka kharashka askari Roomaan ah. Ka qaybgalayaashu waxay heesi doonaan Martinslieder oo ay wehlinayaan kooxo. Dhamaadka dabaaldegga, dabka St. Martin, oo lagu diyaariyay kormeer adag, sugaya dab, kaas oo la gubay markii xubnaha tareenadu yimaadaan.
ST Martin - Parade Songs iyo St. Martin-Ffeuer
Aktarka St. Martin ayaa sidoo kale ku dhajin doona erayada yar ee ka qaybgalayaasha tareenka, laga yaabee in la xasuusto sheekada gaajada iyo qaybta jubbada. Meelo badan, muuqaalkan ayaa sidoo kale lagu soo celiyay.
Ka dib, carruurta raacay tareenka la shidaalkooda mid ayaa hela Weckmann, Stutenkerl oder Martin berriga laga sameeyey cajiinka khamiir macaan, duwan oo ku xiran gobolka.
Dhaqdhaqaaqa ugu weyn ee St. Martin wuxuu ka dhacaa Worms-Hochheim, Kempen oo ku yaala Riinada hoose iyo Bocholt. Tareenadaasi waxay si dhakhso ah u tirinayaan ka qaybgalayaasha 6.000. Carruurta, iidada St. Martin waa mid ka mid ah xafladaha weyn ee dayrta.
Waxay sugayaan xilli hore iyo waxay jecel yihiin inay sameeyaan foosto. Dabcan, carruurta yaryar waxay helayaan taageerada waalidkood, laakiin maahan inay noqoto mid aad u fiican. Dabcan waxaa jira heesaha inta lagu jiro farshaxanka, waxaa jira kookaha kulul iyo buskudka iyo inta lagu jiro casharrada farsamooyinka ah ee roobka ama duufaanka ka baxsan, waxay si fudud ugu dhex jirtaa gudaha.
Dabcan, ardayda da'da weyn waxay sameeyaan shidaal inta lagu jiro fasalka dugsiga. Markii hore, waxay ahayd caado ah in la gooyo waji aad u badan oo ah dabocase sonkorta ka dibna u isticmaal canjeel this sida shucaac.
Intaa waxaa dheer in la wadaago jaakada iyo cunno Martinsgans waxaa jira agagaarka St. Martin sidoo kale caadooyinka kale. Martinssingen ma aha oo kaliya dhacdada inta lagu jiro guuritaanka, laakiin sidoo kale ka dib ama taariikhda gaarka ah.
Gobollo badan, caruurtu waxay gurigooda u guuraan iyagoo gubanaya ka dib markii riwaayad dhab ah, ay heeso martini marti ah oo albaabbada u furan oo ay weydiistaan ​​hadiyado yaryar. Kuwani waa macmacaan, miro ama waxyaalo kale.
Marka la eego magaca Martinisingen caadadii hore waxaa lagu hayaa beelaha Protestant ee Bariga Frisia. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu loola jeedaa Martin Luther, oo maalintaas magaciisu yahay 11. Noofembar waa la dabaaldegaa. Jarmalka koonfurta Jarmalka waa mujaahidiinta belsnickel Waxay filaysaa in hadiyado la keeno St. Martin iyo mararka qaarkood Nussmärtel ie.
Nicholas | Ku dabaaldeg xafladaha
Samee naas naftaada Saint Martin
Saint Martin song - qoraalada iyo qoraalka
Bogga midabaynta Saint Martin Lanterns Moving
Bogga midabaynta Saint Martin / Martinstag
Bogga midabaynta Saint Martin
Mawduuca dhalashada maalinta dhalashada ilmaha iyo xafladaha kale
Xilliga kulaylaha | | U dabbaal samee farshaxan
U dabaaldeg Halloween
Bogga midabaynta St. Martin